Amakristali angabonakaliyo e-Optical, i-Laser crystals-Dien
Nd: Amakristal eGdCOB
Iifresnel Rhomb Retarders
Ii-Waveplates ezi-Super Achromatic
Inyaniso yeZero Order Waveplate
I-Waveplate yoMyalelo ophantsi
Iiplati zeAlexomatic Waveplates
IiDaveplates zeWavelength ezimbini
IGlan Laser iPolarizer
Iindlela zokukhulisa kubandakanya ngokuthe tye kwaye nkqo, ezi zinto (ZnGeP2, AgGaS2, AgGaSe2, GaSe, KTA, KTP, BIBO, LBO, BBO) ziyafumaneka ngobungakanani obuqhelekileyo kunye nolwazelelo. Ezinye zazo, ezineempawu zobungakanani bokulingana okungahambelaniyo kunye nobukhulu obahlukileyo esibonelele ngabo busetyenziswa ngokubanzi kwi-SHG, THG kunye ne-Mid-infrared OPO, iinkqubo ze-OPA, njl njl.
Malunga neDien Tech
Njengenkampani enamandla yetekhnoloji ye-crystalline, i-DIEN TECH igxile kuphando, uyilo, ukwenziwa kunye nokuthengiswa kothotho lweekristali ze-nonlinear optical, i-laser crystals, i-magneto-optic crystals kunye ne-substrates. Umgangatho ogqwesileyo kunye nezinto ezinokhuphiswano zisetyenziswa ngokufayilweyo kwizenzululwazi, ubuhle kunye neemarike zeshishini. Ukuthengisa kwethu ngokuzinikela kunye namaqela obunjineli anamava azimisele ngokuqinileyo ekusebenzeni nabathengi kubuhle nakwifayile yezorhwebo kunye noluntu lophando kwihlabathi liphela ngezicelo ezinomngeni.
Amandla aphakamileyo kunye netekhnoloji ye-laser yamandla aphakamileyo kunye nesemina yesicelo
Amandla aphezulu kunye netekhnoloji yamandla aphakamileyo ye-laser kunye nesemina yesicelo ngoSeptemba 26th-28th, 2021 I-laser yamandla aphakamileyo esekwe kumandla ayo nakwiziphumo zamandla, inegalelo kakhulu kuphuhliso lwefiziksi, isayensi yezinto eziphathekayo, isayensi yobomi, amandla okusebenza kwamandla. A ...
I-CIOP 2021- Julayi 23-26,2021
I-CIOP Inkomfa yonyaka enemixholo ebanzi malunga nokukhanya kunye neefotonics, yaqalwa ngo-2008 yi-Chinese Laser Press, iZiko lase-Shanghai le-Optics kunye ne-Fine Mechanics, i-Chinese Academy of Science. ...
I-AgGaS2 i-crystal 39 ° / 45 ° ye-ultrafast yesicelo sokubonisa ububanzi
I-AgGaS2 i-crystal 39 ° / 45 ° ye-ultrafast yesicelo sokudibanisa ububanzi besebenzisa i-AgGaS2 crystal 8 * 8 * 10mm engafakwanga i-AgGaS2 crystal 8 * 8 * 1mm coa ...
Idilesi:Hayi, 888, Middle Taodu Ave. Isithili saseLongquanyi, eChengdu, PRChina.
Usetyenziso olungakumbi nge- 中文 网站